ကိုရီးယားမှာ အသားကင်စားနေရသလို ခံစားရစေမယ့် Little Korea BBQ – FoodiesNavi
ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြည့်ရင်း သူတို့အားပါးတရစားနေတတ်တဲ့ အသားကင်တွေကိုကြည့်ရင်း သွားရည်ယိုမိတဲ့သူတွေရှိနေပြီလား? ကိုရီးယားထိမသွားနိုင်လို့ အသားကင်စားချင်တဲ့စိတ်ကူးတွေကို မြိုသိပ်ထားစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ကိုရီးယားထိသွားစရာမလိုဘဲ ရန်ကုန်မှာတင် ကိုရီးယားရိုးရာအသားကင်နဲ့ ဟင်းလျာတွေ အဝစားရမယ်ဆိုရင်ရင်တွေတဒိန်းဒိန်းခုန်သွားပြီလား အစားတစ်လိုင်းတို့ရေ။ Foodies Navi ကနေအစားတလိုင်းတို့ ကိုရီးယားနိုင်ငံကို သွားရောက်ပြီး အကင်စားရသလိုခံစားသွားရစေမယ့် Little Korea ဆိုတဲ့ကိုရီးယားအကင်ဆိုင်လေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
Little Korea ဆိုင်လေးဟာသွားလာရလွယ်ကူတဲ့ နေရာမှာတည်ရှိပြီး ညနေ(၄)နာရီကနေ ည (၁၁)နာရီအထိဖွင့်လှစ်ပါတယ်။
ဆိုင်ရဲ့ လိပ်စာအပြည့်အစုံကတော့–No, 95-H ,Wai Za Yan Tar Street , South Oakalapa,Yangon. ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်အိုးထမင်းပူ၊ ကိုရီးယားပဲခေါက်ဆွဲ ၊ ကြက်သား(မီဆော့အနှစ်) ၊ အတွင်းမိုးခိုသား ၊ ဝက်ဂုတ်သားလိပ် ၊ အမဲလျှာ ၊ Korea Taco ၊ ပင်လယ်စာစတဲ့ ကိုရီးယားရိုးရာအရသာစစ်စစ်ကို အပြည့်အဝခံစားရမယ့်ဟင်းပွဲပေါင်း (၅၂)မျိုးကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စားသောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Fresh Juice ၊ Wine ၊ Icecream တွေအပြင် Soju ကိုပါတွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ပြန်ချိန် ပင်ပန်းလာသမျှကို soju သောက်ရင်းကိုရီးယားအကင်လေးနဲ့ တွဲဖက်သုံးဆောင်ပြီး ဖျေဖျောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ so fine ပေါ့နော်။ မိသားစုလိုက်၊သူငယ်ချင်းလိုက် စုဝေးပြီးသွားရောက်သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်း Promotion တွေရှိနေတယ်နော်။ မွေးနေ့ပွဲ ၊ Company ညစာစားပွဲတွေစတဲ့ Event တွေကိုလည်း လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။
တစ်ဆိုင်ထဲမှာတင် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီး အရသာလုံးဝတွေ့သွားစေမယ့် ပူပူနွေးနွေးချိုချိုချဉ်ချဉ်ပူပူစပ်စပ် အရသာအစုံပါဝင်တဲ့ အသားကင်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေကို မီးဖိုပူပူလေးပေါ်တင်ပြီး နွေးနွေးထွေးထွေး စားသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးအမည်မတူတဲ့ အသားကင်အမျိုးမျိုးကို ကိုရီးယားအရသာစစ်စစ်စားချင်ရင်တော့ Little Korea ကိုသာအပြေးလေးသွားလိုက်တော့နော်။
Image Source : www.facebook.com/littlekorea
In Restaurant Guides Tagged BBQ, Desserts, Korean traditional foods Leaveacomment
ဂျပန်စတိုင် Sushi စားနိုင်ဖို့ ဂျပန်ထိသွားစရာမလိုပါဘူး